Usengumfundisi obedonsa ngobunkabi - Ilanga News
Home Izindaba Usengumfundisi obedonsa ngobunkabi
Usengumfundisi obedonsa ngobunkabi
Uthi izinto ezimbi eziphoxa umfowabo zimenze washintsha
UMFUNDISI HQ Nala nomfowabo uMnu Zubumnandi Nala asebesebenza ngokubambisana ezintweni zebandla likamfowabo.
IZITHOMBE NGU: NOMFUNDO NGWANE
UKUZWA ubumna-ndi bezwi leNkosi esejele, sekumsize wathola isikhu-ndla sokuba ngumfundisi ebandleni lomfo-wabo owesilisa waseNkandla owayeyinkabi.
UMnu Zubumnandi Nala (44), ongumfowabo kaMfu Hamilton “HQ” Nala webandla iWorld of Plenty – owaziwa ngeNkosi yomNala – uthi waphenduka esejele, esebhadle iminyaka ewu-11, emuva kokugwetshwa ewu-29, kwalengiswa ewu-10. Wayegwe-tshelwe amacala okubalwa kuwona awokubulala nokutholakala nezibhamu ezingekho emthethwe-ni.
Utshele ILANGA ukuthi ubeyinkabi eyaziwayo futhi abebefisa “ukwenze-lwa umsebenzi” bebazi ukuthi uyawe-nza.
Uthi ekhula ngakubo, kwaku-jwayelekile ukuthi kube nezimpi zezigodi, okwagcina sekunempi yezibongo eyaba nomthelela ekutheni kubulawe abafowabo ababili. Uthi ngaleso sikhathi naye waphila leyo mpilo ngoba ebona kufanele ukuthi aphindisele ngokubulawa kwabafowabo.
Utshele ILANGA ukuthi yize wakhulela eNkandla, kodwa ubebuye abalekele eThekwini uma sekushubile emakhaya. Uke
wahlala isikhashana ehostela iDa-lton, eThekwini, lapho athi bekwaziwa ukuthi uyasishaya isibhamu.
Waqala ukuboshwa ngo-2001 emuva kokutholakala nesibhamu esingekho emthethweni. Ngaleso sikhathi uthi wa-yengafuni lutho oluzo-mhlanganisa nomfo-wabo, “iNkosi yomNala”, ngoba yayisi-ndisiwe.
“Ngangivele ngihlanye uma esekhuluma ngendaba yensindiso ngoba ngangikholelwa kakhulu ekusebenziseni imithi. Phela nobaba osizalayo sakhula eyinyanga,” kusho yena.
Uthi ngesikhathi esakhula, wayehlushwa yimimoya, okwathi noma umfowabo esemgqugquzela ukuba afunde, wazama kodwa wangakwazi.
“Enye-ke into ebeyenza singezwani impela nenkosi (esho umfowabo), wukuthi ibithanda ukuthi sifunde ngoba yona kayifundanga. Ngathi uma ngifika eThekwini, ngabona ukuthi imfundo ibaluleke kangakanani.
“Ngiqale ukuya esikoleni sengineminyaka ewu-16 ubudala, nakhona futhi ngangakwazi ukufunda kahle ngoba nga-ngivele ngigule,” kusho yena.
Uthi ngesikhathi esebunkabini, wayehamba sonke isifundazwe ngoba yena nabahlobo bakhe babebuye bantshontshe imali. Uthi waphinde wabanjwa nesibhamu esingekho emthethweni ngo-2007, waboshwa.
Kwavele kwavumbuka amacala amaningi ayefunelwa wona. Wagcina esebhekene nawu-16 anzima, athi kwayena wayelindele ukuthi uma esegwetshwa, kuyoba wudilikajele. Wagwetshwa iminyaka ewu-29 yi-Nkantolo yeMantshi yaseMtshezi ngo-2009.
“Kuningi okushintshe impilo yami ejele. Ngaqala ngazama ukungena enkolweni yamaNazaretha, kodwa kwangalunga. ngazama eyaseZayoni, nakhona kwangalu-nga ngoba ngangivukwa yiqunga uma sezingibhonya,” kusho yena.
Uthi kwathi noma esegwetshiwe, waqhubeka nokuhamba elinye icala elinzima. Kwazanywa kani-ngi ukuba ayogcinwa ejele eBho-ngweni, eKokstad – elaziwa ngoku-gcina iziboshwa eziyingozi.
“Ngagcina ngihlala isikhashana eNcome ngasuswa lapho ngayiswa eMgungundlovu, ngagcina ngidlu-liselwa ejele laseWestville. Nga-hlangana nezinye iziboshwa saqala saba nemikhuleko. Ngaleso sikhathi ngangibona ukuthi lukhona ugcobo lokukhulekela abantu enginalo.
“Kwakuthi uma kunesiboshwa esiya enkantolo size kimina, sicele ngisikhulekele,” kusho yena.
Uphume ngoNcwaba (August) nyakenye ejele, wangena ngoku-gcwele ebandleni lomfowabo, okuyimanje usengomunye wabefundisi abayizethenjwa zalo.
Uthi ukuduma komfowabo ngenye yezinto ezamenza washi-ntsha izindlela zakhe nangapha-kathi ejele ngoba abaningi babe-vele bamtshele ngezimangaliso azenzayo, abone ukuthi uyampho-xa.
Ekhuluma neLANGA umfowabo kaMfu Nala, uHQ, uthe ibe yinde kakhulu indlela umfowabo ayiha-mbile njengoba esephumile ejele.
“Njengamanje nguye ohola ithi-mba labaqaphi bami, nguye futhi owengamele izinto zami eziningi njengoba ngiyinkosi. Ngisho kunemicimbi engingakwazi ukuyiha-mbela, ngithumela yena.
“Ngesikhathi esejele, abantwana bakhe bebekhuliswa yimina nama-khosikazi ami. Manje ngifisa aga-nwe, akwazi ukuziqalela umndeni wakhe, aqhubeke nokuba yisibonelo esihle,” kusho inkosi Nala.
Previous articleZibakhalele beyokokotela eMnyangweni wezaseKhaya
Next articleISilo sinxusa ukuba kube nokuthula